DHAGEEYSO:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo balan-qaad culus u sameeyay shacabka gobalka Sh/dhexe.
on September 10 2013 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalay booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe ayaa ku balan qaaday fulinta qodobo ay amnigu ugu horeeyso oo ay hor dhigeen maamulka iyo waxgaradka gobalkaasi.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo masuuliyiinta maamulka gobalka Sh/dhexe ee dowladda Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ka dalbaday in laga taageero dhanka amniga islamarkaana degmooyinka gobalkaas la geeyo ciidamo boolis ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inay dhowr jeer oo hore ay soo gaartay cabashada gobalka Sh/dhexe ee la xiriirta in ciidamada amniga la geeyo gobalkaas, waxaana uu madaxweynaha ku balan qaaday in codsigaasi la fulin doono.
Madaxweynaha oo khudbad xasaasi ah ka jeedinaayay kulan uu la qaatay bulshada gobalka Sh/dhexe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay si deg deg ah degmooyinka Balcad iyo Jowhar u geeyn doonto ciidamo boolis ah oo amniga goobahaasi suga.
DHAGEEYSO KHUDBADA MADAXWEYNAHA OO DHAMEEYSTIRAN
Wuxuuna sidoo kale sheegay in dowladda ay ka go�an tahay sidii ay wax uga qaban lahayd sugidda amniga degmooyinkaas, isagoona dhinaca kale tilmaamay in degmooyinkaasi ay dowladda ka furi doono goob caafimaad, waxbarasho, ceel biyood, saldhig booliis kuwaas oo dhamaantood hoos imaan doono dowladda Soomaaliya.